Hydroptere v2 အဆိုပါပျံလှေ DOWNLOAD X-Plane 10 - Rikoooo
Hydroptere v2 အဆိုပါပျံလှေ X-Plane 10
downloads ရယူရန္2384
Author: JP Baril
ဘို့ X-Plane သာ 10.10 + Windows ကို။ အဆိုပါထည့်သွင်းမှတ်တမ်းတင်ဖတ်ရှုဖို့သတိရပါ။
Hydroptèreထို့နောက် 50 ၏ 92,6 မိုင် (100 kph) တွင်တစ်ဦးပွိုင့်နှင့်အတူ kph, ထို 56,3 kph ဖြစ်ပါသည်, ထိုရွက်အတွက် 104 မိုင်၏ bar ကိုဖြတ်ကူးရန်ပထမဦးဆုံးရှကျလှေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါHydroptèreပြင်သစ် yachtsman Alain Thébaultကဒီဇိုင်းတစ်ခုစမ်းသပ်ရွက် hydrofoil ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ multihull hydrofoil ဒီဇိုင်းရွက်-powered တန်ဆာကိုရေပေါ်မှာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီဇိုင်းThébaultအ 1990s ကတည်းကနှောင်းပိုင်း Eric Tabarly နှင့် ပူးပေါင်း. တည်ဆောက်သော hydrofoil sailcraft ၏အကွာအဝေးကနေအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ အောက်တိုဘာလ 5, 2008 တွင်သူမ 52.86 မိုင်၏စံချိန်တင်အမြန်နှုန်း (97.90 km / h; 60.83 တစ်နာရီမိုင်) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်သို့သော်ဒီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကမ္ဘာ့စံချိန်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်လိုအပ်သော 500m ထက်ပိုမိုတိုတောင်းအကွာအဝေးကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2008 တွင်Hydroptèreခေတ္တ 56.3 မိုင် (104.3 km / h; 64.8 တစ်နာရီမိုင်) အထိရောက်ရှိခဲ့သည် Fos-sur-မဲအနီး, ဒါပေမဲ့သိပ်မကြာခင်မှာတိမ်းမှောက်။
လေတိုက်၏4မိုင်အတွက် 2009m သည် ဖြစ်. , စက်တင်ဘာလ 52.86, 97.90 တွင်Hydroptère 60.83 မိုင် (500 တစ်နာရီမိုင် 30 km / h) ၏မြန်နှုန်းထော, အလုံးလုံးလြားလြားကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးဖဲ့။ Hyèresပြင်သစ်နိုင်ငံ; နိုဝင်ဘာလ 2009 အတွက်သူမက 50 မိုင် (50.17 တစ်နာရီမိုင် 92.91 km / h) ၏မြန်နှုန်းနှင့်အတူတစ်မိုင်များအတွက် 57.73 ထုံးအတားအဆီးကိုဖဲ့။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
တစ်ရေကြောင်း site ပေါ်တွင်hydroptèreနေရာချရန်:
Menu ကို / Place / ကဒ် (မြေပုံ) ဒေသခံ /
ရေပေါ်မှာဆလိုက်Hydroptère Make နှင့်ရေကြောင်း site ပေါ်တွင်ဧည့်ခံ၏အမြင့်ကိုချိန်ညှိ။
ကီးဘုတ် "V ကို" ပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောကျောက်ဆူး, ကိုဖျက်မည်။
Hydroptèreလှေ၏ဝင်ရိုးနှငျ့ ပတျသကျ. ရှ၏အနေအထားကိုစဉ်းစားအတွက်က navigate, သင်သည်သင်၏ Joystick ၏ accelerator သင့်ရဲ့ command ကိုသုံး:
သငျသညျမြန်နှုန်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်, (အရှိန်အဟုန် "ကြီးကျယ်သော largue" အတွက်) ရှတန်းစီနေဖြင့်။
သငျသညျနှေးကွေး; တုန်လှုပ်ဖွယ်ရှ (အပန်းဖြေရှ) က။
အဆိုပါတက်မကိုသင့် Joystick ၏ဝင်ရိုး Yaw အားဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်။
အရှိန်အဟုန် "ကြီးကျယ်သော largue" ၌တစ်ဦးအကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းရယူရန်:
တုရိယာ "2D panel က" နဲ့, သင်သည်သင်၏ Joystick (ဝင်ရိုးကိုလှိမ့နှင့်အစေး) နှင့်အတူလှေများ၏ပန်းကန်ပြင်ပေးနှင့်ဗဟိုထည်များ၏လှေငြိမ်မှကိုက်ညီသောတိ (ဝင်ရိုးစေး) ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
မှတ်စု: X-Plane ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုမျက်နှာပြင်များ Anti-ပျံ့ဂရုစိုက်မထားဘူး။ အဆိုပါhydroptère (v2) မျှ plugin ကို "Anti-ပျံ့ / ရေ" ရှိပါတယ်။ ဒီအခြင်း simulation အဖြစ်မှန်နှင့် ludic အနီးအပါးဖြစ်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်။
စည်းမျဉ်းထဲမှာ X-Plane 10
"ပစ္စည်းကိရိယာများ / ဇုန်§က Settings / setting များကို / Joystick"
"အမြင်က Settings / Rendering Options ကို / နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုလယ်"
50 နှင့် 100 ဒီဂရီအကြားပါဝင်သည့်တန်ဖိုးတစ်ခုထားလေ၏။
"ဆက်တင်များ / Rendering Options ကို /"
, pixels ကိုအလင်းရောင်နှုန်းရွေးချယ်ရေး Draw ထားပါ
HDR ကိုက rendering Remove
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး - မိုးလေဝသ "အကြံပြုတန်ဖိုးများ":
အမြင့်လှိုင်းတံပိုး 000.1 (2.0 ကျော်လွန်မှမပါ)
ဆက်သွယ်မှုများ၏လက်နက် Rafale ၏ပျံ့များအတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာကိုအညီ, ကာဗွန်နှင့်အစေးအားဖြင့်သာတည်နေကြတယ်။ သူတို့ကတွက်ချက်နှင့်လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။
အလုပ်အားဤအရာဝတ္ထုအတွက်ကာတွန်းအကြောင်းမူကား, (စန္ဒီ Barbour ကတီထွင်) တစ်ဦးအပိုဆောင်း plugin ကို install လုပ်ရဦးမည်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ http://www.xpluginsdk.org/misc_plugins.htm နှင့် '' CustomSBDatarefs004 '' plugin ကို download လုပ် install လုပ်ပါ။
ဒီရှုခင်းကို OpenSceneryX စာကြည့်တိုက်မှတ္ထုကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ သင်ကသေး install လုပ်မထားဘူးဆိုရင်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး http://www.opensceneryx.com